Home Wararka Gudaha Ciidamada dowladda & Booliska Koonfur oo howlgal Wadajir ah fuliyay
Ciidamada Millaterig Dowladda Soomaaliya oo ay wehlinayaan kuwa Booliska Koonfur Galbeed ayaa howlgal culus oo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab ka fuliyay degaano hoostaga Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay.
Howlgalka ayaa waxaa hoggaaminayay Taliyaha Ciidanka Booliska Qeybta Gobolka Baay Gaashanle Sare Aamin Maxamed Daruur & Saraakiil kale ayaa Ciidamadu kula wareegeen degaano ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, halkaas oo la sheegay in mararka qaar ay weeraro kasoo qaadi jireen.
Saraakiisha Ciidamada dowladda ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo dadka Shacabka ku dhibaateyn jiray dadka Shacabka, sidoo kalena howlgalka kusoo furteen hub farabadan.
Sidoo kale saraakiisha waxaa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Ururka Al-Shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan degaannada ku dhow dhow Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa Ciidanka Gaarka ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo kaashanaya kuwa Federaalka waxaa ay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka wadeen degaano katirsan Gobolka Baay, halkaas oo mararka qaar ay kasoo weeraraan Magaalada Baydhabo.
Previous articleXaalado daran oo soo wajahay Shacabka degaannadii ay ku dagaalameen Soomaalida & Canfarta
Next articleMuwaadin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika